ကြောင်တပ်မဒေါ်ဂျီးလဲ ချာပါတီ ချာ party | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကြောင်တပ်မဒေါ်ဂျီးလဲ ချာပါတီ ချာ party
ကြောင်တပ်မဒေါ်ဂျီးလဲ ချာပါတီ ချာ party
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 16, 2014 in Myanma News, Opinions & Discussion | 10 comments
တပ်မဒေါ်လေ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား လုပ်ကြောင်း အလဲဗင်းဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရသဗျ။ တီဗွီက လွှင့်ပြဆိုဗဲ.. အင်းပေါ့ဗျာ မီးတောင်ပုံမှန် မလာဒဲ့တိုင်းဗျီ၊ နွားနဲ့ဖက် လယ်ထွန်နေရသေးဒဲ့ တိုင်းဗျီမှာစိုဒေါ့ ဂျပန်ခေတ်က ဇီးရိုးတိုက်လိင်ဗျံဒွေ ပျံပြတော့ ပါးဇပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကြည့်သူများ ရှိဦးမှာ။ ဂုံယူပါဒယ် လေယဉ်ဗျံဂျီးဒွေရှိဒါ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ ခေတ်မှီတပ်မဒေါ် ရှိခြင်းဟာ ဂုံယူရမည့် အချက်ပါပဲ.. သို့ဗေမဲ့ ခေတ်မှီအင်္ဂါတွေနဲ့ လျော်ညီဗို့ဒေါ့ လိုပေမဗျ။ နို့မို့စို နိုင်ငံခြားမှာလဲ လစ်ဗင်းတူဂဲသားနေ ငါတို့လဲ အတူနေလို့ ခေတ်မှီနေဗီ ဖြစ်နေဦးမဲ။
သိဂျဒဲ့အတိုင်း စစ်တပ်ဆိုဒါ ကြည်း၊ရေ၊လေ တပ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီညီ ဖွဲ့စည်းထားမှ ခေတ်မှီတပ်မဒေါ်ဂျီးခေါ်ဒယ်။ စူပါပါဝါုနိင်ငံဂျီးဒွေမှာဒေါ့ ဒါထက်ပိုဒဲ့ တပ်ဖွဲ့ ဥမပါ မဟာဗျူဟာမြောက် ဒုံးပျံတပ်၊ ညူ ကလီးယာတပ်၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒပိုးမွှားတပ်တွေ ရှိမှာပေ့ါဗျာ။ အခြေခံကတော့ ကြည်းရေလေပါပဲ။ နောင်မှာ အာကာသယဉ်တပ် အသစ်ပေါ်လာယဉ်ဒေါ့ မပြောဓာတ်ဗူး။ ဒါကလဲ ရုတ်ဝါဒီ သဂျုတ်စီး ဦးမာမွတ် တေမှ ဖြစ်မှာမို့ ခဏဖယ်ထား ရအောင်ပါ။ ယူအက်စ်မှာဒေါ့ မရိန်းတပ်ဖွဲ့ သက်သက်ထားပေမဲ့ ကြည်းတပ်လောက် ဘက်ဂျက်မရှိပါဘူး။ အနေအစား ပိုဆင်းရဲတယ် ပြောသံကြားဖူးဒရယ်။ ရွှေ့လွယ်ပြောင်းလွယ် လိုအပ်လျင် အရေးပေါ်သုံးရအောင် ကြယ်လေးဗွင့် ဗိုလ်ဂျုပ်ကြီး အဆင့်ပေး သီးသန့်ထားတဲ့ သဗောဖြစ်မှာပါ။
ခေတ်မှီတပ်မဒေါ် ဖြစ်ဖို့ ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ဗျာ.. သာမန် လူဘိန်း အတွေးနဲ့ မှိန်းကြည့်လျင်ကို ရုပ်ဝတ္ထု အပြင် ဆိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ အတွေးအခေါ် ရှိရမည်။ မြန်တျန့်စစ်တပ်ကို ဖက်ဆစ် စစ်တပ်လို့ ပြောဒေါ့ နာသူများ နာဂျမဲ။ စဂါးဆိုဒါ သူပြောကိုယ်ပြောဆိုဒေါ့ ငြင်းလို့ စုန်းမှာမဟုတ်။ ဘဝတခုလုံး မိသားစုတခုလုံး အဆုံးရှုံးခံ ခြစ်ပြတဲ့ ဘွားဒေါ်ဂျီးကိုတောင် ကုလားမယား၊ အနောက်ကျွန်၊ အာဏာရူး ပြောသူများရှိ သံယောင်လိုက်သူများ ရှိမှဒေါ့ ဖက်ဆစ်ပြောလဲ သူရို့က မျိုးခြစ်တပ်မဒေါ်ဂျီးလို့ ဖင်လှန်သံကုန်ဟစ် ငြင်းဦးမှာပဲ။ ဒီတော့ အဲဒီအပိုင်း ရှောင်ဆွေးနွေးမဲဗျာ။
ပြောထားပြီးသားနော်.. တပ်မဒေါ်ဆိုဒါ ကြည်းရေလေ သုံးဖွဲ့ပေါင်းထားတာ။ ခုဒေါ့ဗျာ မြန်ကျန့်စစ်တပ်ထဲမှာ အစိမ်းကောင်တွေပဲ ဗိုလ်ကျနေဒယ်။ ကျန်အပြာဝတ်နဲ့ ကာကီဝတ်တွေက သောက်ပေါဒွေလား။ ပညာတတ်တွေကွ.. ဆယ်တန်းအဆင့် ရှိမှ ရေနဲ့လေထဲ ဝင်လို့ရတယ်။ မင်းတို့လို မူလတန်းတတ်ရုံနဲ့ ဝင်ခွင့်ရတာ မဟုတ်ဖူး။ အဲ ကြည်းတပ်ထဲမှာတောင် ခြေလျင်တပ်နဲ့ လက်ရုံးတပ်တွေ ပညာတတ်ပုံခြင်း တခြားစီ။ ထောက်ပို့တပ်၊ လက်ရုံးတပ်တွေက အထက်တန်း ပညာရေး အနည်းဆုံး ရှိရဗျံသေးဒယ်။ နိုင်ငံဓ၈ါမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ၊ ပညာနည်းနည်းတတ်လျင် တိုက်ခိုက်ရေးတပ် မသွားရဗူး၊ ရုံးအထိုင်တပ်၊ ထောက်ပို့တပ်၊ ရေနဲ့လေတပ်တွေ ရောက်တယ်။
မတူဒါဂ ခေတ်မှီနိုင်ငံခြားတပ်တွေမှာ ရေ၊လေ၊ကြည်းတပ်တွေသည် ဒန်းတူ အဆင့်ဖြစ်တယ်။ ကြည်းချုပ်၊ ရေချုပ်နဲ့ လေချုပ်တို့သည် တန်းတူပဲ။ တပ်ချုပ်ယာဒူးကို တလှည့်စီ ကိုယ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတပ်တွေ အသာထားလို့ ထိုင်းမှာတောင် ကြည်းချုပ်တဂေါင်ဒဲက မောင်ပိုင်စီးလို့ မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ခေတ်မှီတဲ့တပ်မဒေါ်မိုလို့။ နိုင်ငံချမ်းသာတော့ တပ်ကို ခေတ်မှီလက်နက်တွေ ဖြည့်တင်းတယ် ဖွဲ့စည်းတယ်။ မြန်တျန့်ပြည်လို ပေါချောင်ကောင်း တလုပ်သေနတ်တွေချည်း ဝယ်မဆင်ဗူး။ ကြည်းတပ်အတွက် ဖြည့်တင်းရတာ ရေနဲ့လေ စာရင် အပုံဂျီး သက်သာဒယ်ဗျာ။ ခေါင်းမစားဗူး… ခြေလျင်တပ်ရင်း တရင်းကုန်ကျဇယိတ်နဲ့ တိုက်လိင်ပျံဒဇင်း၊ စစ်သင်္ဘောဒဇင်း ဝယ်ဆင်တာ ဘယ်ဟာက ပိုကုန်မည်ထင်သဲ။ နောက်ပြီးတော့ စစ်ဗိုလ်ဇုတ်တွေက ပြည်ပအန္တရာယ်သာ ပုံကြီးချဲ့ပေါနေဒါ တဂယ်က ပြည်တွင်းပုန်ကန်မှုပဲ ရှိတာသိတယ်။ သိလို့လဲ ရေနဲ့လေကို ပကာသနာလောက်ပဲ သဗောထားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေဗျာ.. စစ်လက်နက်ဆိုဒါက အနှစ်၂၀ကြာလျင် ဒိတ်အောက်သွားရော။ ဆင်ဖြူ ဒေါ်ဂျီးတွေဝယ်ထားပြီး မသုံးရ၊ ဒိတ်လွန်တဲ့အခါ အသစ်ထပ်ဝယ်ရတော့မဲ။ မဝယ်ဗဲ ပစ်ထားဗျံဒေါ့ ကိုယ့်ရန်သူက အသစ်ဝယ်ဆင်လိုက်ရင် ကိုယ့်အဟောင်းဂျီးက ဘာမှသုံးမရတော့။ ကြည်းတပ်ကြဒေါ့ ဆန္ဒပြရင် နှိမ်နင်းလို့ရတယ်၊ နယ်စပ်လက်နက်ကိုင်တွေကို နှိပ်ကွပ်လို့ရတယ်။ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို ဂျပန်ခေတ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်လဲသေမှာပဲ။ သူပုန်ဆိုတာကလဲ မီးကျိုးမောင်းပျက်ကိုင်တိုက်နေတာဆိုတော့ ကြည်းတပ်အတွက် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ တခါဝယ်ထားလျင် သုံးဗေဒေါ့။ ပြည်ဒွင်းမှာ ပြောပါဒယ်။ ပြည်ပမှာတော့ ဖွတ်ကျားပေါ့။ ကိုးဆယ်ပြည့်လွန်နှစ်တွေက ကရင်ဖက်မှာ ထိုင်းဖက်ကျူးကျော်တဲ့ မြန်တျန့်တပ်တွေကို ထိုင်းလေတပ်က ဆော်ထည့်လိုက်တာ အမှတ်ရဂျမှာပါ့။ အဲဒုံးက တွင်း၂ဗိုလ်စုတ်တင်ဦး မသေသေးဘူး။ သူက ထိုင်းကိုပစ်ဖို့ လက်နက်ကြီးနေရာတွေ ရဟတ်ယဉ်နဲ့ သွားကြည့်ရင်း သေတာ။ ဗုံးခွဲလုပ်ကြံခံရဒယ်လဲ ပြောဒါပဲ။ အဲလို သောက်ရှက်ကွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားကနေ မစ်တိုက်လိင်ပျံတွေ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ဝယ်ဒါ။ မောင်တေဇ အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကြီးပွားသွားဒယ်ထင်ရဲ့။
မြန်တျန့်လေတပ်အတွက် ဝယ်ယူရန် ကာချုပ်ကျီး စဉ်းစားနေသည့် လိင်ဗျံဒဇီး
ခေတ်မမှီဗူး ဝေဖန်တော့ သစ်တောပြောင်အောင်ခုတ်ပြီး စစ်သင်္ဘော၊ ဂျက်တိုက်လိင်ဗျံတွေ ဝယ်သဗျ၊။ ဝယ်ပြီးတော့ နောက်က ထောက်ပံ့ရေး မလိုက်နိုင်တော့ ရေတပ်သင်္ဘော ပင်လယ်ပြင် ထွက်ရင် စက်လှေတွေဆီက ဆီတောင်း၊ အရက်တောင်း၊ စားဇရာတောင်း၊ လေတပ်က ပျံသန်းချိန် ပိုပြ၊ လျှော့မောင်းပြီး ဆီခိုးထုတ်… အဲ.. ကြည်းတပ်ကတော့ ရွာထဲက ကြက်ဝက်ဘဲတွေ ခိုးသတ်ပေါ့ဗျာ။
၈၈ခုနှစ် အာဏာသိမ်းခါစ တလုပ်ပီက အကြွေးနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ ဂျက်တိုက်လိင်ပျံတွေ အခုစို လေ့ကျင့်ရေးလိင်ပျံတောင် မသုံးနိုင်ဒေါ့ဗူးထင်ဒယ်။ အဲလိုပဲ ရုရှားက အစောပိုင်း ဝယ်တဲ့လိင်ပျံဒွေလဲ နောင် လေးငါးနှစ်ဆို အတော် မော်ဒယ်အောက်ပြီ။ အောက်မအောက်ဆိုဒါ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် သိသာတယ်။ သူတို့အသစ်ဝယ်ရင် ကိုယ်ကလဲ အသစ်လိုက်ဝယ်ရဒယ်.. ဒါနဲ့ပဲ မြန်တျန့်တောင်တွေ ဟောက်ပက်ဖြစ်၊ သစ်တောတွေပြုန်း သယံဇာတတွေ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းကုန်ဒါ။ ဟိုနိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးက ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ချင့်ချိန်ခွဲဝေသုံးစွဲတာ။ မြန်တျန့်ပြည်လို့ စစ်တပ်က ရသမျှဗတ်ကြက် မောင်ပိုင်မစီးထားဗူး။
ပြောရင်းဗေးချော်သွားပီ။ ဆောဒီး… ပေါချဉ်သာ စစ်တပ်တွင်း ရာထူးခွဲဝေမှု မညီမျှမှု…. အဲဒီအချက်နဲ့ဒင် မြန်တျန့်စစ်တပ်ရဲ့ တရုတ်သကန် ပေါ်ဗီ။ ကာချုပ်ရာထူး အစဉ်အဆက် ကြည်းတပ်ကပဲ ယူထားသဗျာ။ ကွပ်ကဲရေးမှူးရာထူး၊ စစ်တိုင်းမှူးရာထူးတွေကရော.. ကြည်းတပ်ပဲ မဟုတ်လား။ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်မမှူးတို့ဆိုတာ တိုက်ခိုက်ရေးမို့ ခြေလျင်တပ်ကလာတဲ့ ကြည်းတပ်ဗိုလ်တွေ ဖြစ်တာနားလည်ဒယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းမှူးကွပ်ကဲရေးမှူးတွေကြတော့ အုပ်ချုပ်ရေးနွယ်လို့ ရေနဲ့လေတပ်ပါ မရသင့်ပေဗူးလား။ စာရင်းစစ်ကြည့်လိုက် တိုင်းမှူးထဲမှာ ရေနဲ့လေကလာတာ လက်ချိုးရေလို့ရဒယ်။ လက်တဖက်စာတောင် ပြည့်ဗမှား မသိ။ ကုတ်ခြာ ကာချုပ်၊ ဒုချုပ်၊ ကွပ်ညှိ၊ ကွပ်ကဲရေးမှူး၊ တိုင်းမှူးအားလုံးကို ကြည်းတပ် အုပ်စီးထားတယ်။ အခြား လက်ရုံးတပ်၊ စစ်ထောက်ချုပ်၊ စစ်ရေးချုပ်၊ ဘာချုပ်ညာချုပ်တွေမျာလဲ ကြည်းကချီးပဲ။ နောင်ဆို ရေချုပ်နဲ့လေချုပ်တောင် ကြည်းတပ်က ကိုင်တော့မဲ။
ကွယ်ရေးဦးဇီးဂျုတ်ဆိုဒါ သမဒက ကိုင်ရမဲ။ ကြည်းရေလေ ဦးဇီးဂျုပ်တွေက တလှည်စီ ပူးတွဲစစ်ဦးဇီးဂျုတ်လုပ်မှ မျှတပေမပေါ့။ ခေတ်မှီပေမပေါ့။ ထိုင်းမှာတောင် အဲလိုပဲလုပ်တယ်။ အခြား အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကြည့်လိုက်အုံ.. အဲဒီလိုပဲ။ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေတော့ သွားမကြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ.. အာဏာရှင်ပါဆိုမှ လုပ်ချဉ်သလို လုပ်မှာပေါ့။
ဘောင်းဗီချုပ်ဝံဂျီးတွေထဲမှာဆိုလဲ ကြည်းတပ်ကပဲ များပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အလွမ်းသင့်တဲ့ ရေ၊လေများသာ ဝေစုနည်းနည်းပါးပါး ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက အတွင်းစည်းပိုင်း လုံးဝ ဝင်လို့မရ။ သူတို့အစား ခံပြင်းလွန်းလို့ ပြောဒါပါ။ စစ်သားပဲဗျာ သူပစ်ကိုယ်ပစ်ပေါ့ ဘာခေါင်းငုံ့ ခံရမှာလဲ။ ပြောလိုက်ရင် တပ်မဒေါ်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ.. လက်တွေ့မှာ ရေနဲ့လေကို ဖိထားတာ..။ ရေနဲ့လေက ဒုတိယဒန်းဆား စစ်သားဒွေပါ။ တပ်မဒေါ်ဂျီး သံဂေါင်းဟစ်သူကြည့်လိုက် ခြေလျင်တပ်ကချီးပဲ.. ချီးထုပ်တွေ…။ အရိုးအရင်း ကိုက်နေရဒဲ့ ရေ၊လေ အချို့လဲ ပါမှာပေါ့။ တလောက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဂွင့်ပေးဒေါ့ တပ်တွင်းမညီမျှမှုကို ဖော်ထုတ်တဲ့ လေတပ်က အရာရှိ အရာဂံ ဆယ်ဂဏန်းလောက် ထောင်ထဲမှာ ကျန်နေဂဲ့သဒဲ့။ အဲဒါ မင်းတို့ ညီအကိုဒွေကွ..။
ခုလဲကြည့်.. သောက်တီးသောက်တဲ့ မတီးမတော်.. လုပ်ချလိုက်ပျံဗီ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦး.. ကျုပ်ပေါဒါ လွန်သလားလို့… အင်း.. ဒီပုံနဲ့မိုးချုပ် မျိုးပြုတ်တော့မဲ ရေနဲ့လေရယ်…။
(၆၇)နှစ်မြောက် တပ်မတော်(လေ)နေ့ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် Flying Display အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်က မိတ္ထီလာတပ်နယ် လေကြောင်းအတတ်သင် လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံသတင်းထုတ်လွှင့်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် သရုပ်ပြပျံသန်းမှု စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပထမဦးစွာ စွန်ရဲအုပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးက တပ်မတော်(ကြည်း)အလံကို ချိတ်ဆွဲပြီး ကျန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးက တပ်မတော်(ရေ/လေ) အလံများကို အသီးသီးချိတ်ဆွဲကာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား ပျံသန်းအလေးပြု ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (စဂချက်။ ဒါလေတပ်ပွဲမှာနော်.. ကြည်းတပ်ပွဲမှာဆို သူတို့ဆားဖို့ စားပွဲထိုးပေးရမဲထင်အိ။)
– See more at: http://www.news-eleven.com/local/%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%8A-%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%81%E1%80%B7%E1%80%B2%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%81%86%E1%81%87-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9C-%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94#sthash.L7qxJGiQ.dpuf
so called ဦးကြောင်
ယူအက်စ် စစ်တပ်နဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားမှတော့.. ကိုရင်ကြောင်ရယ်..။
တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီးသေရင်သာ.. တပ်ကွဲပြီးနောင်ဂျိန်ချ ပြည်တွင်းစစ်မီးထ,မလောင်အောင်.. သတိထားရမှာ…။
ဤသူတို့တတွေကတော့.. ချာပါတီ.. ချာ..။
.ပျီ ဒွင်းဂ ညီကိုယ်ချင်းပဲ တစ်သက်လုံးဆော်နေကြရဒေါ့ ရေနဲ့လေ လူရာသွင်းမခံရတာအမှန်ဗဲ :dd:
အူးကျောင် တားတားဂို ဆိတ်ဆိုးနေဒုန်းလား
ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မဒေါ်ဆိုတဲ့ ဇဂလုံးနဲ့ သုံးနှုန်းတာ ကြားတိုင်း
ဒါဆို ကျနော်က ပြည်သူ မဟုတ်ဘူးပေါ့. . .လို့. . .
လွှတ်တော်ထဲကို အူးကြောင်ကြီးကို ပို့ချင်တာ :mrgreenn:
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တိုင်းပြည်အတွက် လေယာဉ်ပျံတစ်စီးဝယ်ရင်
ဟော သူသားအတွက်လဲ တစ်စီးဝယ်ပေးရတယ်
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တိုင်းပြည်အတွက် နောက်ထပ်လေယာဉ်ပျံ တစ်စီထပ်ဝယ်ရင်
အဲ သူ့မြေးအတွက်လဲ တစ်စီးဝယ်ပေးရကြတယ်
သားတွေ မြေးတွေ ၀ယ်ပေးရတာလဲမပြောနဲ့လေ ” ဖေဖေ/ဘဘကြီး သား ကိုလဲ လေယာဉ်ပျံတစ်စီးလောက် ၀ယ်ပေးပါလား သားသားမောင်းချင်လို့ ” ပူဆာတာကိုးဗျ။
( သြော် မေ့တော့မလို့ တလွဲမတွေးနဲ့နော် ဘုရားဈေးက ၀ယ်ပေးတာပြောတာပါ )
ကြောင့် ကို သတ်မဒေါ်မှ အလိုရှိသည် ဆိုပါလားး
စာက တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲ ဖတ်ယူရတယ်။ :mrgreenn:
နင်မသာ ငါအသုဘဘဲ ပျင်ဥာတက်ဒွေဂ
ရေနဲ့လေ ပေါင်းရင်တောင် ခြေကျင်လျှောက်တဲ့လူဒေကို မနိုင်ဝူးပေါ့ ???